စီးပွားရေးစျေးကွက်မဟာဗျူဟာနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ပိုမိုများပြားလာသည်။ ဘယ်တော့လဲ Pepsi က Super Bowl ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ရိုးရာစာနယ်ဇင်းသမားများက လောင်းကစား.
Super Bowl တွင်ကြော်ငြာခြင်းသည်လောင်းကစားခြင်းမဟုတ်ပါ။ တကယ်လား
Super Bowl ကြော်ငြာသည်စက္ကန့် ၃၀ လျှင်ဒေါ်လာ ၃ သန်းကုန်ကျသည်။ Pepsi က $3million secoond ကြော်ငြာနှစ်ခုနှင့် 30 စက္ကန့်ကြော်ငြာကိုစီစဉ်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့ ၂၀၀၈ နဲ့ ၂၀၀၉ ကြားမှာစျေးနှုန်းက ၁၀% ကျော်တက်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်ကြည့်ရှုသူ ၉၈ သန်းသို့ရောက်ရှိရန်ဒေါ်လာ ၁၂ သန်းဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ကြည့်သူတစ် ဦး လျှင်ဒေါ်လာ ၀.၁၂ ဖြစ်သည်။
ဒါကိုမမေ့ပါနဲ့ Pepsi အမြတ်အစွန်း 43 ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည် သူတို့အမှန်တကယ်နေစဉ် ကိုပြု Super Bowl ကြော်ငြာအတွက်ပေးရသည်။ Hmmm, Super Bowl ကြော်ငြာများသည်အတော်အတန်အကျိုးမရှိသောအသံများဖြစ်သည်။
ဒီသင်တန်း၏, မပါဝင်ပါဘူး အစစ်အမှန်လောင်းကစား…အမှန်တကယ်မောင်းနှင်မည့်စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်နိုင်သောအေဂျင်စီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခြင်း အသွားအလာတန်ချိန် သင့်အမှတ်တံဆိပ်သို့ ဒါကိုသေချာကြည့်ကြပါစို့ဆိုဒါ၏အမြတ်အစွန်းသည် ၀.၀၀ ဒေါ်လာ…။ ဆိုလိုသည်မှာ Pepsi ၏ကြော်ငြာသည်ကြည့်ရှုသူတစ် ဦး စီအားကြော်ငြာ၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုဖုံးလွှမ်းရန်အတွက်အနည်းဆုံးဆိုဒါ (အနည်းဆုံးဆိုဒါသန်း ၁၀၀ ကျော်) ၀ ယ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဆန့်ကျင်တွင်, ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာလက်ခံအသုံးပြုပုံ Pepsi ကုန်ကျစရိတ်နှင့် r ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်လူမှုရေးနည်းပညာများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နိုင်ပါတယ်တစ် ဦး ချင်းစီကြည့်ရှု၏တူညီသောအရေအတွက်က။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ၂ မိနစ်အတွင်းမှာဖြစ်ရပ်တစ်ခုတည်းမှာဖြစ်ပျက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူ့ကိုမှန်တယ်ဆိုတာဘယ်သူ့ကိုမှလိုချင်မှာလဲ။ Pepsi သည်ရေရှည်မဟာဗျူဟာနှင့်လိုအပ်သောပစ္စည်းများကိုပြန်လည်ယူဆောင်လာရန်လိုအပ်သည်။
Pepsi ကအကောင်းဆုံးဗိုင်းရပ်စ်ကြော်ငြာပြိုင်ပွဲကိုကမကထပြုလျှင်အနိုင်ရသူသည်ဒေါ်လာ ၁ သန်းရရှိမည်ဆိုပါကအသို့နည်း။ နောက်ထပ်ဒေါ်လာ ၁ သန်းထပ်ဆောင်းဆုများရှိပါသလား။ သူတို့သည်ဒေါ်လာ ၁ သန်း ထပ်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Youtube, Twitter နှင့် Facebook တို့တွင်ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
မည်သည့်နည်းစနစ်ကိုပိုမိုထိရောက်မည်ဟုသင်ထင်သနည်း၊ ပို၍ သက်ဆိုင်သောပရိသတ်နှင့်သတင်းစကားတို့ဖြင့်? နည်းပညာနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ပိုမိုပေါင်းစည်းလာသည်နှင့်အမျှကုမ္ပဏီများသည်မယုံနိုင်လောက်သောဖြစ်နိုင်ချေများကိုသူတို့၏မျက်လုံးများဖွင့်ပေးသောအချိန်ဖြစ်သည်။
မှတ်စုတစ်ခုပဲဖြေ - Super Bowl ကြော်ငြာတွေအလုပ်လုပ်သလား၊ မလုပ်ဘူးလားဆိုတာတော့ငါမပြောပါဘူး။ GoDaddy သည်နှစ်များတစ်လျှောက်ဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းစျေးကွက်ဝေစုကိုရယူရာတွင်အလွန်အောင်မြင်ခဲ့သည် အချို့ရယ်စရာကြော်ငြာ။ ၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်သည့်အချိန်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာနှင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လည်အကျိုးအမြတ်တိုးမြှင့်ရန်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်မှတ်ချက် - Pepsi ကလိုဂိုအသစ်ကိုလိုချင်တယ်။ စကားမပြောနိုင်ပါဘူး
26:2009 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 9, 59 တွင်
Super Bowl ကြော်ငြာတွေ မလုပ်ဘဲ တခြားနေရာတွေမှာ ပိုက်ဆံမသုံးတာ ပိုကောင်းပြီး ကြာရှည်ခံတဲ့ အကြံတစ်ခုလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ Mt. Dew သည် အသုံးပြုသူဖန်တီးထားသော ဗီဒီယိုဖြစ်ရပ်တစ်ခုရှိထားပြီးဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာအချို့ကို ရရှိခဲ့သည်။ လိုဂိုအကြောင်း၊ နောက်ဆုံးတွင် Pepsi သည် Coke ၏ဖောင့်ကို ဖြုတ်ချမည့်အစား ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာပါသည်။ Logo ကို ဘယ်သူက အရင် တက်လာလဲ ၊ Pepsi ဒါမှမဟုတ် Obama campaign team လို့ တွေးမိတယ်။ လိုဂိုကိုယ်တိုင်က ဘာကိုမှ ကိုယ်စားပြုပုံမပေါ်ပါဘူး။